घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू डोमिनिक सोलिन्की बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नामले उपनाम "xGoalanke"। हाम्रो डोमिनिक सोलिन्की बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई उनीहरूको बचपनको मिति सम्म ल्याउनेछ। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धिको सामुदायिक कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनको वृद्धि बढ्दै जान्छ।
हो, सबैले प्रिमियर लीग क्लबहरूको लागि पहिलो-टोली खेलाडीको लागि निरन्तर खोजको बारे जान्दछन्। तथापि, केवल डोमिनिक सोलंकाको जीवनीमा मात्र केहि कुरा उल्लेख छ जुन धेरै रोचक छ। अब अगाडी अचम्म बिना, सुरु गरौं।
डोमिनिक अयोडल सोलंका-मिचेल सितम्बर 14 को 1997th दिनमा उनको आमाबाबु, एक नाइजीरिया पिता र ब्रिटिश आमा पढ्दै, इङ्गल्याण्डमा जन्मिएको थियो। बेल्जियममा जन्मिएको भए तापनि आफ्नो जैविक पिता को माध्यम ले नाइजीरिया जरीहरु छ। उहाँ नाइजीरिया युक्रेन जातीय समूहबाट हुनुहुन्छ जसको जनसंख्या देशको दक्षिण पश्चिमी भागमा छ।
दर्दनाक बचपन अनुभव:
डोमिनिक सोल्लिकाले आफ्नो प्रारम्भिक वर्षमा आफ्ना आमाबाबुबीचको घट्दो सम्बन्ध देखाए। यो एक समय चीज अलग गर्न थाल्नुभयो। चाँडै नै, सोलंकाको बुबाले आफ्नो परिवारमा साहसी भई हिंडे। यो गरीब Solanke र उनको आमा (तल चित्रित) आफैं बाँच्न छोडेर, शायद कुनै पैसा छैन।
एक शक बिना, एक Solice जस्तै कुनै पनि बच्चा जो अभिभावक ब्रेक अप को माध्यम ले रहन को लागी यो केवल कारण धेरै राम्रो गहिरो भावनात्मक दुखाइ जान सक्छ। Solanke एक अन्य फुटबलर मध्ये एक हो जसले टूटेको घरको अनुभव गरेको छ र जसको प्रभाव उसले अझै पनि सताउँछ।
समय बित्यो, भावनात्मक चोटहरू निको भयो। डोमिनिक सोलंकाको आमाले उत्तीर्ण भयो र आफ्नो कदम-पितालाई विवाह गर्यो।
आफ्ना भाइ र बहिनीको साथ बढ्दै गयो, सोलंकेले ब्राइटन हिल सामुदायिक विद्यालयमा भाग लिनुभयो। स्कूलमा, उनले तिनका आँखा फुटबलमा राखेका थिए जुन उनको समस्याग्रस्त वास्तविकताहरूबाट टाढाको धेरै स्रोत हो। सोलाङ्कको जैविक पिता जसले माफ गरिसकेका थिए पछि पछि उनको छोराको जीवनमा फर्किए। उनले आफ्नो क्यारियर को छनौट गर्न को लागी उनलाई निर्देशित गरे जो आज ले आफ्नो लाभांश को भुगतान गरेको छ।
पछाडी खाली पछाडीको साथ जब त्यहाँ उनको खुट्टामा एक फुटबल थियो, फुटबलको लागि जवान सोलंकाको जुनूनले उनलाई 2004 वर्ष मा चेल्सी अकादमीमा नामांकन र सफलतापूर्वक सफलता देख्यो। उनको प्रवेश को एक राम्रो सम्झना मध्ये एक मध्ये चेल्सी को किंवदंती संग एक-एक थियो- जॉन टेरी.
यो एक रोमाञ्चक समय थियो जुन जवान जो आफैले एक क्लबमा पाएको बस यसको मालिक द्वारा पुनर्जन्म भयो रोमन अब्रामोविच। सोलंकाले अरू उज्ज्वल अकादमी खेलाडीहरू थिए। टमी अब्राहाम र रूबेन लफ्फुस-चेक जसले विशेष पलसँगको मौका पायो रोमन अब्रामोविच.
सोलंका ले चेल्सी अकादमी मा विभिन्न उमेर रैखिक पारी खेती गरे र एक प्रमुख सम्मान जीता जसको एक वर्ष पुरस्कार को उनको प्रतिष्ठित अकादमी खेलाडी थियो।
यस पुरस्कारलाई जित्न चेल्सीको वरिष्ठ टोलीसँग खेल्न पदोन्नति प्राप्त गर्नुहोस्। चेल्सीका लागि एक वरिष्ठ क्लब खेलाडीको खोजीमा सोलिङ्ले पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ठूलो सम्झौता गरेको देखियो।
मई 2014 मा, सोलिन्के अन्तर्गत 17 टोलीको भाग थियो जसले 2014 UEFA युरोपेली अंडर-एक्सएनएक्स च्याम्पियनशिप जित्यो र उनी टूर्नामेंटको संयुक्त शीर्ष स्कोर गरे।
जनवरी 2015 मा, सोलङ्के 2014 को लागि इंग्लैंड पुरुषहरु को युवा खेलाडी को नाम दिइयो। यस समयमा सोलंकाले अझै पनि उनको चेल्सीको पहिलो स्ट्राइकर बन्न खोजेको महसुस गरेकी थिईन मात्र बाँकी थियो। अर्को वातावरणमा खेल्न थप अनुभव प्राप्त गर्न यसको आवश्यकता थियो।
सोलंकाले भिट्सेलाई ऋणमा पठाइरहेका थिए। नेदरल्यान्डमा हुँदा, स्ट्राइकरको लागि राम्ररी चल्थ्यो, उनले एरिडिभियसीमा सबैभन्दा पुरानो व्यावसायिक फुटबल क्लबको लागि महत्त्वपूर्ण गोल गरे।
आफ्नो ऋण जादूबाट फर्काउने, सोलङ्केले पहिलो-टिमको स्थानमा स्थानको लागि लडाइँ खोज्न थाले। उनले आफैंलाई खेलकुदको कमीको निरन्तरता देखेर निराश भए र पछि पछाडी चेल्सी तेस्रो छनोटकर्ताको रूपमा राखेका थिए डिएगो कोस्टा र Michy Batshuayi.
निराशा र उनको अनुबंधको म्याद समाप्त भएपछि, सल्केले लिभरपूलमा एक बलियो कदम उठाए। तिनको स्थानान्तरण एक तीव्र नाटक थियो जसले आफूलाई आफैले प्रशिक्षणबाट निस्क्यो। यस अवधिमा, सोलनका अफवाहहरूले पहिलो स्ट्राइकरलाई भन्दा बढी मोटाइको आवश्यकतालाई मिडियामा देखाए। यो अफवाह पछि पछि सङ्कङ्क द्वारा डेबिट गरिएको थियो जुन उनको प्रकाशन मा डेली टेलीग्राफ बनाउन सुधार को मजबूर गरे।
एक टोलीमा खेलाडीहरू जस्तै मोहम्मद साला र Sadio Mané, र रोबर्टो फर्मिनो, सलंकाले अझै पनि पहिलो-पटक उल्लेखनीय भूमिकाको लागि एक कठिन समय लडेको थियो। यसले तिनको साथ अर्को निराशालाई सतायो Klopp.
फेरि सुरू, सोन्केले जनवरी जेएनएमएक्सक्समा सँगी प्रीमियर लीग क्लब एएफसी बर्नमाउथको लागि साइन अप गरेको थियो। यो समय, इङ्गल्याण्ड स्टार आशावादी छ कि मध्य मध्य प्रिमियर लीग टोलीले उनीहरूको सपना नियमित रूपमा पहिलो टोली खेलाडीलाई सच्याउनेछ।
डोमिनिक सोलंकाको गर्लफ्रेंड को हो?
डोमिनिक सोलंकाको सम्भावित लुकेको रोमाञ्चक एक छ जसले सार्वजनिक आँखाको जाँच मात्र बचाउँछ किनभने उनीहरूको प्रेम जीवन धेरै निजी र सम्भवतः नाटक-अज्ञात प्रेमिकाको साथ मुक्त हुन्छ। सत्य हो, लिखित रूपमा सोलंकाले आफ्नो सम्बन्ध जीवनलाई कुनै पनि जानकारी बनाउन निर्णय गरेन। यो तथ्यले लेखकहरूलाई आफ्नो प्रेम जीवन र डेटिङ इतिहास बारे तथ्यहरू प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउँछ।
डोमिनिक सोलंकाको व्यक्तिगत जीवन जान्नको लागी फुटबलबाट टाढा पुग्न मद्दत पुर्याउनेछ। उहाँ कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले साधारण जीवन बिताउँछ र सरल र अझै सुरुचिपूर्ण कपडा लगाउन मन पर्छ।
सोलङ्केले जीवनको एक तरिकागत दृष्टिकोण राखेका थिए जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि मौकाको लागि केहि पनि बाँकी छैन। यसले उनको युवा क्यारियर सफलताको बारेमा व्याख्या गर्दछ (वर्षको अकादमी खेलाडी र युक्सएनमिक्स विश्व कप)। Solanke मानिन्छ कि यिनीहरूमध्ये अरू राम्रो गेमिंग समयका लागि उहाँका प्रमाणहरू हुन्
तर, जीवन शैली
डोम धनको चिन्ता बिना एक धनी फुटबलर हो। उनको ठूलो भागमा प्रायः प्रदर्शनीको जीवनसँग जोडिएको छ जुन प्रायः चाडपर्वहरूको लागि जान्छ। यो मनोवृत्तिले केही लोकप्रिय बिन्दुहरू आफ्नो लोकप्रियता स्तरमा थप्दछ।
आफ्नो हवेली मा फिर्ता, सलंका ले एक शानदार जीवनशैली को जीवन मा रहछन र उनको मुद्राहरु महंगे मदिरा खरीद गर्न को लागी राखन को लागी छ। उहाँ लगभग £ 10 मिलियनको लायक हुनुहुन्छ (लेखनको समयको रूपमा) र एक धनी मान्छे जस्तो जीवन बिताउँछ।
एक पटक डोमिनिक सोलाङ्कले भन्यो; ... "नगर्नुहोस् कसैलाई कसैले तपाईंलाई बताउछ कि तपाईंका सपनाहरु धेरै ठूलो छन्। यदि तपाईं केहि चाहनुहुन्छ भने, जानुहोस्। "
यो उनले चेल्सी किंवदंती संग एक फोटो साझा गरे पछि भयो जॉन टेरी जब उहाँ 8 वर्षको उमेर हुनुहुन्थ्यो, एक पटक उहाँ चेल्सी अकादमीमा सामेल हुनुभयो।
आफ्नो नाइजीरिया सम्बन्धी सम्बन्धी अफवाह:
उनीहरूले समान उपनाम लिइरहेका छन्, प्रायः मानिसहरू सोनका लागि सोचेका छन् टोमवा सोलांकसँग सम्बन्धित छ जसले नाइजेरियन जडहरूमा इङ्गल्याण्डको अर्को खेलाडी हो। सावधान जाँच पछि, उनीहरूले दुई रगत सम्बन्धी कुनै सम्बन्ध छैन भनेर देखाएको थियो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डोमिनिक सोलिन्की बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
दान मार्च 7, 20203मा: 36 बिहान
यस कथाको लागि र तपाईंलाई थाहा भएको तथ्यहरूको लागि धन्यवाद। भविष्यको लागि डोमिनिक सबै शुभकामना। चियर्स